Usuku lokuzalwa lukaCharles Simic. Eminye yemibongo yakhe | Uncwadi lwangoku
Un Meyi 9 ye1938 wazalwa UCharles simic, Imbongi yaseMelika eyazalelwa eBelgrade ephatha kwimibongo yayo yobomi beli xesha. Ibiyi Ibhaso lika Pulitzer lo Mbongo ngo-1990 kwaye isaziwa njenge elinye lamazwi amakhulu yombongo welizwe jikelele. Ndenza ukhetho lweminye imibongo yakhe.
1 Ngubani uCharles Simic
1.1 Imisebenzi engakumbi
2.0.1 Ukusuka kwimibongo ekhethiweyo
Ngubani uCharles Simic
Wazalelwa ngaphakathi Belgrade ngo-1938. Ngo-1943 utata wakhe wafudukela eUnited States (Wayengunjineli kwaye umsebenzi wakhe wawumenze wafumana unxibelelwano oluninzi). Olunye usapho, UCharles, umama wakhe kunye nomntakwabo omncinci, abakwazanga ukudibana naye phezulu 1954. Bafika bahlala eChicago. UCharles wagqiba amabanga aphakamileyo, kodwa khange ndiye eyunivesithiEndaweni yokuba aqale ukusebenza aze abhale nemibongo. Emva kokwenza inkonzo yasemkhosini ngo-1961 waye bathunyelwa eJamani naseFrance njengamapolisa omkhosi.
En 1968 wapapasha incwadi yakhe yokuqala, Uthini ingca. Ufundise uncwadi kwiYunivesithi yaseCalifornia emva koko kwiYunivesithi yaseNew Hampshire apho aqhubeka khona nokusebenza namhlanje. Ipapashiwe ngaphezu kweencwadi ezingamashumi amathandathu, phakathi kwabo enye kwiprozi, Ubomi bemifanekiso. Eyokugqibela yile Wothuka ebumnyameni, epapashwe ngo-2018.
Iyaqwalaselwa Enye yeembongi zolwimi lwesiNgesi ezincomekayo kunye nezincoko, kodwa uyathandwa kakhulu kwimibongo yamazwe aphesheya. Uphumelele Ibhaso likaPulitzer lowama-1990 loMbongo kwaye ukwangumbongi weMbongi yaseMelika.
Umhlaba awupheli neminye imibongo
Bhabha kuthambiso, eqokelela iinkumbulo zabo.
Ilizwi ngentsimbi yesithathu ekuseni
Iqela lethu lemigulukudu
kujinga ejikeleze isiphatho sesibane
Zonke kunye nenye nganye.
Inqanawa yesiporho sobomi bam
kunye nomsinga wangokuhlwa.
Kule ntolongo yethu
Apho umgcini-gosa alumke khona
akukho mntu wakha wayibona
Kufuneka ube nesibindi kakhulu
ukucofa eludongeni lweseli
xa kucinyiwe izibane
ukuba kungenjalo ngeengelosi zezulu,
ewe ugwetyelwe isihogo.
Ifowuni ngaphandle komgca
Into okanye umntu endingenakumchaza ngegama
indenze ndahlala phantsi ndamkela lo mdlalo
Ndiyaqhubeka nokudlala emva kweminyaka
ngaphandle kokwazi imithetho yabo okanye ukwazi ngokuqinisekileyo
ngubani ophumeleleyo okanye olahlekileyo,
kangangoko ndandiqhekeza ubuchopho bam ngokufunda
isithunzi endisibonisayo eludongeni
njengendoda elinde ubusuku bonke
umnxeba ovela kwifowuni ngaphandle komgca
ezixelela ukuba inoba iyavakala.
Ukuthula okundingqongileyo kukhulu kakhulu
ukuba ndive ingxolo yamakhadi axubileyo,
kodwa xa ndijonga emqolo, ndingonwabanga,
kukho inundu kuphela efestileni,
ingqondo yakhe yokungalali kunye nengqondo engenamikhono efana neyam.
Ukusuka kwimibongo ekhethiweyo
Kwaye sikhuphe amazinyo.
Inqaku lifakwe phantsi kocango
Ndabona ifestile ende eyimfama
Ngeminwe emininzi emnyama
Ndabona umthi omdala weapile
I-shawl yomoya emagxeni akhe,
Ukuqhubela phambili unesizungu kancinci kancinci
Indlela yeenduli ezomileyo.
Ndabona ibhedi engalungiswanga
Ndabe ndisiva ukubanda kwamashiti wakhe.
Ndabona impukane imanzibe ebumnyameni
Undijonge ngoba bendingazokwazi ukuphuma.
Ndabona amatye awayezile
Ukusuka kumgama omfusa omkhulu
Ukuxinana kumnyango wangaphambili.
Uloyiko ludlula emntwini luye emntwini
Njengokudlula kwegqabi xa kungcangcazela
Ngequbuliso wonke umthi uyangcangcazela
Kwaye akukho mqondiso womoya.
Esi sihlalo sasikhe sangumfundi ka-Euclid.
Incwadi yemithetho yakhe ihleli esihlalweni sakhe.
Iifestile zesikolo zazivuliwe
Ngoko umoya wawaguqula loo maphepha
Ukusebeza izilingo ezizukileyo.
Ilanga litshone phezu kophahla lwegolide.
Yonke indawo izithunzi ziye zanda
Kodwa u-Euclid akazange athethe nto ngoluhlobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Usuku lokuzalwa lukaCharles Simic. Eminye yemibongo yakhe
U-Anika entre Libros, ibhlog yokuqala yoncwadi ngeSpanish, wazalwa ngo-1996.